Nikaragoà: Ampitain’ny Media Sosialy Miampita Sisintany Ny Rariny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2017 2:33 GMT
(Marihina fa tamin'ny 11 Aprily 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Fanamarihan'ny Toniandahatsoratra: Araka ny hitanareo eo amin'ny sarintany miloko etsy an-kavanana rehefa mijery ny Global Voices ianareo, dia misy firenena sy faritra sasany no miavaka kokoa amin'ny tranonkala noho ireo hafa. Matetika izany dia satria manana bilaogera maro kokoa ny firenena sasany noho ny hafa. Any Santiago, Shily, ohatra, dia saika tsy araka mihitsy ny manara-maso ny tabataban'ny aterineto isan'andro. Saingy any Paraguay, vitsivitsy ihany ireo bilaogera. Teo ho eo amin'ny vitsy sy vitsy kokoa ny vondrom–piarahamonin'ny mpamahana bilaogy ao Nikaragoa nandritra ny fotoana fohy. Manana tombony isika amin'izao fotoana izao manana an'i Rodrigo Peñalba sy Mario Delgado ao amin'ny Barricada.com.ni ho mpandray anjara ao amin'ilay tranonkala. Mijery ny fomba famolavolan'ny bilaogy sy ny tranonkala fifampizaràna lahatsary ny hevitry ny maro momba ny raharaham-pitsarana iray nampiady hevitra izay niampangana ilay Amerikana Eric Volz noho ny famonoana ilay sipany tao Nikaragoa ny lahatsoratr'izy ireo voalohany .
Niteraka fisalasalana amin'ireo fanehoan-kevitra, vaovao ary tatitra rehetra nivoaka tao amin'ny fampitam-baovao Nikaragoana ny fanentanana nataon'ny fianakaviana Volz tao amin'ny fampitam-baovao.
Niezaka hisarika ireo fandaharana tamin'ny fahitalavitra Amerikana Avaratra, ny pejy fanehoan-kevitra, ary ny senatera sy ny kongresy izay miasa eo amin'ny sehatra ara-politika mba hanerena ny fitsarana Nikaragoana ny fianakaviana Volz amin'ny fahafahana mampiasa ny YouTube, MySpace ary ireo bilaogy isankarazany.
Etsy andaniny, naneho ny hevitr'izy ireo tao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra sy ny pejy fanehoan-kevitra tao amin'ny gazety nasionaly ireo mpisera Nikaragoana, izay mbola niparitaka loatra ka tsy mbola manana tontolon'ny bilaogy matanjaka .
Samy nilaza momba ny raharaha ny andaniny sy ny ankilany, ny sasany niaraka tamin'ny endrika fanehoana finamanana manokana, ny hafa niaraka tamin'ny fitiavan-tanindrazana, ary ny maro hafa tamin'ny fanohanana tamin'ny endriny isankarazany.
Tao amin'ny sehatra fizaram-baovao nasionaly, namaly ny fanamby antserasera i El Nuevo Diario tamin'ny fanangonam-baovaony tamin'ny raharaha Volz tamin'ny alàlan'ny fanamafisana fa marina ny tatitra [ES] sy ny zava-misy notaterin'izy ireo; saingy miezaka ihany koa izy ireo ny hanova ny hevitry ny fianakaviana sy ny naman'i Eric Volz.
Mihoatra ny fahamarinan'ny zava-misy marina sy ny tsy fahamelohan'ny ankolafy voakasika, dia anisan'ny ady iray ho an'ny fampitam-baovao nentim-paharazana ao Nikaragoa ( La Prensa , El Nuevo Diario , sy ny fandaharam-baovao amin'ny fahitalavitra) ny tsindrin'ny media sosialy ao amin'ny tontolon'ny bilaogy izay fomba iray vaovao ho an'ny asa fanaovan-gazety sy ny fampahalalam-baovao iraisana mifototra amin'ny fifandraisana ara-tsosialy nirafitra tao amin'ny Aterineto.
Afrika Mainty 14 ora izay